Seenaa Dhokataa Ilmaan Oromoo Biyya Eritrea Keessaa – Welcome to bilisummaa
Seenaa Dhokataa Ilmaan Oromoo Biyya Eritrea Keessaa
bilisummaa May 13, 2013	Leave a comment
Waa’ee koo duubatti deebi’ee gad fageenyaan ibsuu caalaa gabaabumattin eenyummaa koo dubbiftoota barruu kanaaf ibsuun barbaada. Ani waggoota muraasa dura barataa Yunivaristii Jimmaan ture. Sochii barattootaa Oromoo yunivaristii Jimmaa keessatti deemaa ture keessatti hanga dandeettii koo qooda hin tuffatamne kennaan ture. Wayitan barataa sadarkaa lammaffaa ture irraa kaasee maadhee ABO kan biyya keessaa jalatti ijaarameen qooda Oromummaa kiyya bahachaa ture. Maatii siyaasaan miidhame keessattin guddadhe waan taheef gaa fa Yunivaristii Jimmaa seenes, hojii qabsoo moggaatti dhiisee barnoota kiyya qofaa irratti fuulleffachuu hin dandeenye. Abbaan koo yeroon ani xiqqaa ture irraa kaasee miseensa ABOti jedhamee baroota dheeraaf mana hidhaa keessa dabarse. Qaamas itti hir’ateera. Haati keenya oliif gad jettee abbaa keenyaaf mana hidhaatti gala deddeebisaa nu guddifte. Madaa kanatu oggayyuu na dhukkuba waan taheef ABO akka qaroo ija tiyyaa, akka dhiiga kiyyaatti ilaalaa fi dharra’aan guddadhe. Waa’ee koo asuma irratti gabaabseen garan yaada ka’eefitti deebi’a.
ABOn yoomi irraa kaasee Eritrea akka jiru beekuu baadhullee, bara 1990moota
gara dhumaa keessa ABOn Eritrea jiraachuu miidiyaa mootummaa Wayyaanee irraa dhagahaan ture. Booda keessa ammoo bal’inaan haasawamaa dhufe. Anis kanumaaf jecha ABO argachuuf gara Eritreatti qajeeluu akkan qabu murteessee karaa eegale. Finfinnee irraa ka’ee hangan daangaa Itoophiyaa fi Eritrea gahutti qormaata ulfaataa keessan dabre. Humara bakka jedhamun gahe. San booda achitti baatii tokkoof hojii humnaa hojjachaa akkattan daangaa qaxxamuree cehu qoradhe. San booda ilma Oromoo kan dhalootaa godina baha Shawaa tahe, waraana
mootummaa keessaa miliqee hojii humnaa irratti bobba’e tokko waliin wal bare. Namni kun hojii humnaa kana golgaa godhatee namoota daangaa ceesisaa ture. Suutuma jedhee bubbulee rakkoo kiyya itti himadhe. Innis hin deemiin asuma teenyee hojjannee biyya keenyatti deebinaa naan jedhe. Deebi’uu akkan hin dandeenya itti himeen amansiifadhe. San booda karaa na akeeke. Anis guyyaa tokko galgala sa’a 9 irratti karaa eegale. Mallattoolee inni naaf kenne qabadhee karaa muree deemaa bulee, ganama oggaa lafti barii’u waraana Eritreatti harka kennadhe.
Amma Abdiin koo bara dheeraa waan naaf milkaawu natti fakkaate. Waraana
Eritreatti akkuman harka kennadheen, ABO barbaacha akkan deemu itti hime. Isaanis rakkoo hin qabu nu bira turtee suuta boqottee deemta naan jedhan. Haala
kanaan torbanoota lamaaf qormaata osoo narratti gaggeessanuu achuma isaan waliin jiraadhe. Akuma torbaan lama fixeen konkolaataa Raashina/gala waraanaa fide irra na buusanii na qajeelchan. Achi bakka waraanni mootummaa Itoophiyaa itti walitti qabamu Afaabeeti bakka jedhamu na geessan. Bakka Afaabeeti jedhamu kanattis ABO akkan barbaadu irra deddeebi’ee hime. San booda namoonni tokko
tokko natti dhufanii TPDM ykn Sochii Dimokiraasummaa ummata Tigiraay dhaaba jedhamutti akkan makamu na gaafatan. Ani kaniin manaa baheef Oromoof
qabsaawuu qofaaf, akka tahe kanaaf ammo ABO malee dhaaba biraa akkan hin barbaanne irra deddeebi’ee itti hime. Baatilee muraasa booda nu fuudhanii konkolaataan naannoo Hareenaa jedhamutti nu dabarsan. Mooraa humni waraanaa guddaan keessa jiruttin of arge. Kan haasawamu afaan Tigirinyaa qofa. Amma dubbiin naaf galte. Warra TPDM jedhaman bira akkan jiru. Warri mootummaa bakka saniin nu gahe osoo hin deemiin, maaliif bakka kana na fiddan? Ani Oromoodha, ABOn barbaada jedhee itti hime. Kana booda dhimmi kee nu hin laallatu isaan waliin wal haasawi jedhanii achumatti na gatanii kutan.
Innis ani duraanuu isinitti himeera, ammas balballi keenya isiniif banaadha, qabsoon gaggeessinus qabsoo ummataa waan taheef nu waliin hiriiruuf fedhii yoo qabaattan wanti isin dura dhaabbatu hin jiru jedhee mana hidhaatii nu yaase. Haa tahu malee mana hidhaa keessaa baanullee kallattiin gara ilmaan Oromoo warra ijaarameetti hin makamne turre. Akka kanaan duraa mana hidhaallee tahuu baatu, waraana isaanii warra kaadhimamaatti nu makanii hojii humnaatti nu bobbaasan. Ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessaa baane akka walitti dhufnee hin maryanneef adda addaa jaarmiyaa keessa nu facaasan. Bakka dalagaatti walitti dhufnee yoo wal haasofne, afaan Oromoon wal haasawuun dhorkaa akkka tahe nu akeekkachiisan. Dhaaba Oromoo qofa osoo hin taane, dhaaba sabaa fi sab-lammootaa biroollee ijaaraa akka jiran hubadhe. Torbanitti guyya tokko sagantaa sabaa fi sab-
lammootaa jechuun qophii qopheessuu eegalan. Afaan waltajjii san irratti hayyamamu afaan Amaaraa qofa tahe. Sanaan alatti afaan Tigirinyaa barachuunis dirqama akka tahe nutti himan.
Innis guddoo hin raajamne. Garuu “Bishaan Fira fakkaatee nama nyaataa” jedhee mammaakee callise. Maal jechuu barbaadde? Jedheen gaafadhe. “Anaafuu naaf hin galle” jedhee deebii naaf kenne. Fuula isaarraa aarii fi dhiphina arge. Itti deddeebi’ee gaafachuu hin feene. Dubbiin hangi tokko naaf galte waan taheef bulfadheen gaafadhe. Innis waan hedduu naaf hime. Yeroo dheeraa Eritreatti deddeebi’uu isaa fi san dura ammo baroota dheeraaf miseensa WBO buleessa tahuu. Oromoonni keenya biyya alaa jiraatan qondaalonni ABO Asmaraatti galanii jireenyatti jiru, jedhanii haasawu naan jedhe. Dhaggeeffachuun itti fufe. Garuu Asmaraan alagaaf dhiisii ilmaanuma biyyaafuu bakka itti bashannanii jiraatan akka hin taane naaf hime. Mootummaa Shaabiyaa keessatti namoonni gariin qabsoo keenya kana irraa jibba akka qaban naaf hime.
Sanumatti dabalee waa’ee Kamaal Galchuufaa naaf kaase. Kamaal Galchuu namni onnachiisee akka inni dhaaba irraa cabee bahu kan jajjabeesse qaamuma mootummichaa keessaa murna tokko tahuu naaf hime. Sana duras seenaan fakkaataan raawwatamuu taa’een irraa dhagahe. Baatii lamaaf waliin jiraannee waan hedduu na taphachiise. Hogganoonni keenya qabsoon kun akka jiraattuuf wareegama ulfaataa baasaa akka jiran, innillee umurii kanaan qabsoo keessatti cihee kan hafeef maanguddoon isaa olii qabsoo kallattii baayyee qabdu keessatti cinniinnatanii jiraachuu akka tahe na hubachiise. Diina fira fakkaatutti siqnee karaa deemuu dadhabne jedhe. Anis waan hedduun hubadhe. Ammas onneen koo qabsoo na feete. Kanaaf ammoo osoo hangamuu haalli mijaawaan jiraatee, gara gammoojjii Eritreatti qajeeluu qalbiin na dide.
Oromoonni biyya ambaa jirtan, hunda jechuu baadhullee hedduun keessan ilaalcha dogoggoraa qabdanitu jirtu. Asmaraan lafa itti bashannan, lafa itti qabsoo dagatanii of qananiisan akka hin taahe waanan dhagahe hedduu keessaa hanga xiqqoo ibseera. Ani gama kootiin hogganoota ABO haala danqaa fi gufuun itti heddummaate keessatti qabsoo hadhooftuu gochaa jiraniif dinqisiifannoon koo guddaadha. Ammallee galata qabdu jedhaan. Yaada koo guduunfuun dura ammas irra deebi’ee kaniin jedhu, hogganoonni Shaabiyaa, barri itti wal gaafannu ni jiraati, nurraa dhaabbadha, kan kanaan nu gahes isinuma ammallee adeemsi amma itti jirtan fala isiniif hin tahu dhaabbadhaa, imaammata keessan keessa deebi’aa ilaalaa jechuun barbaada. Dargaggoonni Oromoos yoo qabsoo barbaaddaniif biyyuma keenya keessatti haa hojjannu. WBOn kallattii maraan jira, caasaan ABO bal’aan biyya keessa jiraati biyyuma keenya irratti qabsoo keenyatti haa jabaannu isiniin jedha.
Injifannoo Ummata Oromoof!!!! T.F YKN Addaamuu
Tags Abo amna Asmaraa dukkanaa Ertiraa Mana Hidhaa OLF seenaa
Previous MuldhataTV Gadaa
Next Godina Harargee Bahaa magaala Awwadaayitti walgahii galgala kana gaggeeffamterratti qaadhimamtoota filannoo boruu jadhamee warri beekkame